ललितपुर कांग्रेसमा अमात्यको टीम नै पराजित - Sankalpa Khabar
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ललितपुरको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा जिल्ला सभापति मदन अमात्यको पूरै टीम पराजित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत भएको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा ललितपुरका ६ वटा प्रदेश कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा जिल्ला सभापति अमात्य निकट उम्मेदवार पराजित भएका हुन् ।
शुक्रबार राति सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा (१) को सभापतिमा मिलन सिलवाल विजयी भएका छन् । उनले तीर्थ घलानलाई पराजित गर्दै जीत हासिल गरेका हुन् ।
त्यस्तै प्रदेशसभा (२) मा ज्ञानबहादुर लो प्रदेशसभा सभापतिमा विजयी भएका छन् । २०१ मत ल्याएर विजयी भए उनका प्रतिस्पर्धी कृष्ण चन्द्र महर्जनले ११० मत प्राप्त गरे ।
दुवै प्रदेशसभाका विजयी सभापतिलाई कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणाको समर्थन थियो । घलान र महर्जन जिल्ला सभापति अमात्यका उम्मेदवार हुन् ।
ललितपुर क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा (१) को प्रदेश कार्यसमिति सभापतिमा दिवाकर नेपाल निर्वाचित भएका छन् । सभापतिका लागि तीन जना उम्मेदवार थिए । नेपालले ८५ पाए भने उनका प्रतिद्वन्दी सञ्जय अर्यालले ६३ र जयकिशन बोगटीले २८ मत प्राप्त गरे ।
प्रदेश सभा (२) को सभापतिमा चन्द्रमान बज्राचार्य सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला सभापति अमात्यको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा पनि उनका दुवै उम्मेदवार पराजित भएका छन् ।
प्रदेशसभा क्षेत्र (१) मा वीरेन्द्र महर्जन विजयी भए । उनले ११५ मत पाए भने प्रतिस्पर्धी गोविन्द घिमिरेले १०७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) मा सुरेन्द्र डंगोल विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी निरन खड्काले ७० मत पाए । सभापतिमा विजयी महर्जन र डंगोललाई महासमिति सदस्य जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठको समर्थन थियो ।
३ माघ १४:२५
धादिङमा सडक खन्दा पहिरो गयो,वाटो खन्दै गरेको डोजर सहित…
२९ पुष १०:२८
३० पुष १६:३६
साढे ११ केजी चाँदीका गहनासहित एक जना पक्राउ
३ माघ १३:३२